Holland oo hakisay baaritaanka diyaaradda - BBC News Somali
Holland oo hakisay baaritaanka diyaaradda
Image caption Dagaal ayaa ka socdo hareeyaha goobta ay diyaaradda ku dhacday
Ra’iisul wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa dib u dhigay baaritaan ka lagu sameynaayay burburka haray ee diyaaradda Malaysia laga lahaa ee lagu riday dalka Ukraine, wuxuuna sheegay inay aad halis u tahay in baaritaanka uu sii socdo.
Mr Rutte ayaa tilmaamay sii socoshaha dagaalka u dhexeeya xoogagga dowladda Ukraine iyo mucaaradka gooni u goosadka ah ee ka dhacaya meel u dhow halkii ay diyaaradda ku burburtay, inaysan macquul ahayn in khubarada ay siiwadaan baaritaan badqab ah oo ay gaaraan burburka ugu dambeeya.
Waxa uu intaa raaciyay waxyaabaha muhiim ka ah ee ay heleen baarayaasha gudaha isla markii ay dhacday diyaaradda in waxbadan oo aan horey loogu fikireyn laga ogaaday.
Ra’iisul wasaaraha Holland ayaa sheegay in baaritaanka dib loo bilaabi doono marka loo arko in amni lagu kalsoonaan karo uu ka jiro goobta.
Balse, ururka Iskaashiga iyo amniga ee midowga Yurub ayaa siiwada howshooda ay ka hayaan meesha ay diyaaradda ku dhacday.
Kuxigeenka madaxa howlagallada ee ururkaasi, Alexander Hug, ayaa BBC-da u sheegay in halista amni xumada ay si joogto ah isu bedeleyso.
Image caption Waa askar qaaday mayd ka mid ka mid ah dadka ku dhintay diyaaradda la riday
Mr Hug ayaa sidoo kale tilmaamay in rasaas ay si joogto ah uga dheceysay meel ku dhow goobta uu baaritaanka ka scodo, maalintii arbacadana uu madfac ku dhac goob ku dhow meel ay ku sugnaayeen kooxda baarayaasha.
Reer galbeedka iyo maamulka Ukraine ayaa aaminsan in diyaaradda ay soo radiyeen bishii hore kooxaha mucaaradka, ayna suuragal tahay inay ku qaldeen oo ay u maleeyeen diyaarad military oo ay ciidamada Ukraine lahaayeen. Mucaaradka ayaa diiday masuuliyadda arrintaasi.
Maydadka inta badan dadkii saarnaa diyaaradda oo gaarayay 298 qof ayaa loo celiyay dalka Netherlands, waxaana weli loo maleynaayaa in 70 mayd lagu la’yahay bariga dalka Ukraine.
Dagaal aad u xoog badan ayaa ka socdo halkaasi, ciidamada dowladda Ukraine waxay isbuucan galeen deegaano ay ku xoogbadan yihiin mucaaradka oo ku dhow Donetsk.
Sikastaba, mucaaradka ayaa weli maamula inta badan gobolka, oo ay ku jirto dhammaan goobaha ku wareegsan halka ay diyaaradda ku dhacday.